Sound Effect ကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းနားထောင်ချင်ပါသလား? -
သင်ဟာ သီချင်းနားထောင်တဲ့အခါမှာ ပုံမှန်ထက်ကျယ်တဲ့ အသံနဲ့ Effect ကောင်းကောင်းနဲ့ နားထောင်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်လား? နောက်ပြီး တချို့ Android Device တွေမှာပါတဲ့ Speaker, Built-in Sound System တွေက Volume ကျယ်ကျယ် မထွက်လို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ သူတွေရှိရင် ဒီ Article ကိုကျော်မသွားသင့်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ အခုပြောပြသွားမယ့် အကြောင်းကတော့ သင့်ရဲ့ Android Device တွေရဲ့ Volume ကို Original Volume ထက်ပိုကျယ်အောင် Boost နိုင်မယ့် 2019 မှာ အကောင်းဆုံး App ၅ ခုကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Volume Booster App ၅ ခုကတော့ 2019 မှာ အကောင်းဆုံး Android Volume Booster App စာရင်းဝင်ခဲ့တဲ့ App တွေဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းနားထောင်ရတာ နှစ်သက်သူ၊ အပျော်တမ်း သီချင်းဖန်တီးချင်သူတွေ စမ်းသပ်အသုံးပြုသင့်တဲ့ App တွေလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Sunday January 12th, 2020/ Blog/0Comment